Eyona nto iphambili yokuPrinta i-ingroud lift L6800 (A) enokusetyenziselwa ulungelelwaniso lwamavili amane Umenzi kunye neFektri | IsiTonghe
Ubungakanani bokuphakamisa ubuninzi yi-5000kg, ilungele ulondolozo lweemoto, ulungelelwaniso lwamavili amane.
Ingalo nganye yenkxaso ixhotywe ngeplate yekona kunye nesilayidi esecaleni, kwaye kulayishwa umzila kaloliwe kwicala elingaphakathi leengalo ezimbini zenkxaso, kunye netroli yokuphakamisa yesibini enokutshebeleza kubude belifti imisiwe kuyo. Olu hlobo loyilo lunokuqala ukusebenzisana nokuma kweevili ezine. Okwesibini, isondo lengubo yesithuthi iphakanyisiwe ngetreyini yesibini yokunyusa, ukuze amavili ahlukaniswe nengalo exhasa, kunye nenkqubo yokumiswa kunye nokuqhekeza kulungiswe.
Ngexesha lokusebenza okungaphakamisiyo, ingalo yenkxaso iyazika emhlabeni, kwaye umphezulu uphezulu ngomhlaba. Kukho ipleyiti esezantsi yokulandela phantsi kwengalo yenkxaso, kwaye isitya esingezantsi sixhotyiswe ngotshintsho oluphezulu. Xa isixhobo siphakanyisiwe, ipleyiti esezantsi elandelelweyo inyuka ide iyeke ukugungxula ngomhlaba, kwaye igcwalise ikhefu emhlabeni elishiywe kukuphakama kwengalo yenkxaso. Igroove yokuqinisekisa ukulinganiswa komhlaba kunye nokhuseleko lwabasebenzi ngexesha lolondolozo.
Egqithileyo Post kabini ingroud lift series L5800 (B)
Isilinda esibambeleyo esinye, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto,